Ukuphupha ngeRadio Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kubantu abaninzi, unomathotholo ubalulekile kubomi bemihla ngemihla. Nokuba ukwikhaya lakho, emsebenzini okanye emotweni, unomathotholo uhlala ukunika ulwazi olubalulekileyo nolungabalulekanga kwaye ungakhetha kwizikhululo zikanomathotholo ezohlukeneyo ukuba loluphi uhlobo lomculo ongathanda ukuba udlalwe kuwe. Unomathotholo udlalela ukudlalwa ecaleni. Kwaye okwangoku, kukho eli lizwi lingasemva, eliqhelekileyo kuthi kwaye, nangona ngamanye amaxesha sisazi ukuba asisaboni, lisinika imvakalelo yokuba kukho umntu othetha nathi kwaye asisodwa.
Bambalwa abantu abanomathotholo ngohlobo lwesixhobo esinye kwigumbi labo lokuhlala namhlanje kunangaphambili. Enkosi kubudala bedijithali, ukumamela unomathotholo ngoku kuya apho sifuna khona: kuyo yonke into el mundo. Irediyo ye-Intanethi inokufikelelwa kwizixhobo ezininzi zokugqibela, umzekelo, i-smartphone, ithebhulethi okanye i-smart TV. Nokuba luphawu lwamaphupha, unomathotholo unokungena kwihlabathi lethu lamaphupha kwaye usinike ulwazi olunomdla ngathi.
1 Uphawu lwephupha «unomathotholo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «unomathotholo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «unomathotholo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «unomathotholo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi, umfanekiso wephupha "unomathotholo" uthetha unxibelelwano kunye nolwazi. Kwabaphuphi, oku kunokuthetha ukuba kwikamva elikufuphi ikakhulu usecicini loku ukutshintshiselana y Conocimiento Zabalaza. Ukuba umamela ilizwi kunomathotholo kwilizwe lamaphupha, uyakufumana ulwazi olubalulekileyo oluvela ngaphandle kungekudala. Ngokunokwenzeka umntu ophuphayo ikwayimodareyitha, intatheli okanye umsasazi omve kunomathotholo. Oku kunokuthetha ukuba ngokwakho ungumthombo wolwazi kwabanye kwaye kunzima kakhulu ukugcina iindaba, nokuba zezobucala, uzenzele.
Njengentatheli, ukuba ubhala amanqaku kanomathotholo okanye unomathotholo, oku kungabonisa umnqweno wokusasaza ulwazi. Ukuba uthenga irediyo, izinto kungekudala ziya kuba nesiphithiphithi kwabo bachaphazelekayo. Zinokubakho iihambo ezininzi okanye imisebenzi ekufuneka uyilungiselele ngokuqinisekileyo. Ukudikwa akuyi kuvela apha kungekudala.
Ukuva amazwi kunomathotholo kodwa ungayiqondi le nto basixelela yona kunokuba luphawu lwe imfihlo oya kuyifunda kungekudala. Umculo, njengomculo woqhankqalazo, kunye nezandi ezimnandi ezidlala kunomathotholo, zibhengeza ukonwaba okuvuya, nangona kunjalo, ukuphupha kusazigcinela kwaye kuyimfihlo. Ukuba uva amanqaku anomxholo okanye umculo ongaqhelekanga kunomathotholo, oku kunokuthetha ukuba umamele peligro ithi iyabonakala kuphela xa ujonga okwesibini.
Uphawu lwephupha «unomathotholo» - ukutolikwa kwengqondo
Isimboli yamaphupha "irediyo" ikwanento yokwenza nonxibelelwano kutoliko lwengqondo lwamaphupha. Ngamanye amaxesha umfanekiso wephupha uvela xa usiva ingxolo kuwo, kodwa ngaphandle kokuqonda igama lento ithethwayo okanye iphinde yavela apho. Oku kunokuba luphawu lokuba kwihlabathi lokwenyani, kananjalo, umntu uhlala engaziva okanye eviwa ngabanye.
Ukumamela incoko kunomathotholo luphawu kubo Ingxoxo ukuqonda i phupha malunga Yiba ngaphakathi. Mhlawumbi ungumntu obuza imibuzo kwaye ahlalutye okuninzi. Umntu osoloko efuna ukufumana inkcazo ngayo yonke into kwaye osoloko efuna iimpendulo ebomini.
Kodwa mhlawumbi ikwayimeko echaseneyo, kuba kude kube ngoku umntu akafuni kujongana neli lizwi langaphakathi. Ngoku jonga eli phupha isicelo I-subconscious yakho yokujongana ngakumbi nelizwe lakho leemvakalelo. Fumana ixesha lokuthula ukuze wenze isithuba esikuvumela ukuba uqaphele ilizwi lakho langaphakathi.
Ukumamela unomathotholo ngocoselelo emaphupheni nako kungabonakalisa isigxina Ukugxininisa ukuba. Apha, naye, uvumelekile ukuba aphuphe ajonge ukufana nobomi bakhe bokwenyani kwaye azibuze ukuba usebenzisa phi na uhlobo lokuphazamiseka ukuze angabinakho ukujongana naye kunye nokwenzekayo kuye.
Uphawu lwephupha «unomathotholo» - ukutolika kokomoya
Unomathotholo luphawu lokuchazwa ngokwasemoyeni kwamaphupha. unxibelelwano kwinqanaba lokomoya.